Raw L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3) ဗီဒီယို
L - (+) - Ergothioneine (EGT) အမှုန့် Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် L - (+) - Ergothioneine (EGT)
CAS အရေအတွက် 497-30-3
မော်လီကျူး Formula C9H15N3O2S
မော်လီကျူး Wရှစ် 229.3 g / mol
Solubility ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည် (10 mg / ml အထိ)
Application l ergothioneine အမှုန့်ကိုကျန်းမာစေသောဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်အသုံးပြုသည်
L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Ergothioneine သည်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် imidazole လက်စွပ်ပေါ်တွင်ဆာလ်ဖာအက်တမ်ပါဝင်သော histidine ၏ thiourea အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်သက်ရှိအနည်းငယ်သာဖြစ်သောအထူးသဖြင့် Actinobacteria, Cyanobacteria နှင့် fungi အချို့တွင်ပြုလုပ်သည်။ Ergothioneine သည်ဆဲလ်ထဲသို့ ၀ င်ရန် OCTN1 (ဗီဇသင်္ကေတ SLC22A4) ဟုလည်းသိကြသောသီးခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး EGT လိုအပ်သည်။ EGT စကားရပ်ကိုလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်လိုင်းများတွင်အတည်ပြုထားပြီး၎င်းကို ergothioneine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို in vivo တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
L-ergothioneine သည်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး histidine ၏ thiol / thione ဆင်းသက်လာသည်။ L-ergothioneine ကိုမှိုများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဘုရင်ကဏန်း၊ အမဲသား၊ ဝက်သား၊ သိုးသငယ်နှင့်ကြက်သားတို့အပါအဝင်အခြားအစားအစာများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်။
ဘာဖြစ်သလဲ L - (+) - Ergothioneine (EGT) ?
L-Ergothioneine သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်မှိုများ၌တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ဘုရင်ကဏန်း၊ ergothioneine ပါဝင်သောမြက်များနှင့်အခြားအစားအစာများမှစားကျက်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များမှအသားများကိုလည်းတွေ့ရသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ပရိုတိန်းများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ Ergothioneine ကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
လူများသည်အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါတို့ကိုဖြစ်ပွားစေသည်။
L - (+) - ERGOTHIO သည်အချို့သောဘက်တီးရီးယားများနှင့်မှိုများတွင်သဘာဝ chiral အမိုင်နို - အက်ဆစ်ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်သော biosynthesized ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် radical scavenger၊ ultraviolet ray filter၊ oxidation-လျှော့ချသည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆယ်လူလာဇီဝသက်ရှိများကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မ cytoprotector အဖြစ်အသုံးပြုသောအရေးပါသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။
L-Ergothioneine သည်တစ်ခါတစ်ရံအရေပြားတွင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည်။ အရေးအကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ အိုမင်းရင့်ရော်သည့်လက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
L - (+) - Ergothioneine (EGT) အကျိုးကျေးဇူးများ
L-ergothioneine သည်အလွန်ထူးခြားသည်၊ ၎င်းသည်ဗီတာမင်စီနှင့်အီးတို့ကဲ့သို့သောအခြားဂန္ထဝင် antioxidants များနှင့်မတူဘဲ erythrocytes ကဲ့သို့သောဆဲလ်အချို့၏အမာခံကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အမှန်တကယ်သယ်ဆောင်လာသည့်ပရိုတိန်းအတွက်ကုဒ်ပါသည့်မျိုးရိုးဗီဇရှိသည်။ ဆဲလ်များ၏စိတ်နှလုံး။ ထို့ကြောင့် L-glutathione ကဲ့သို့အရေးကြီးသောဆဲလ်အတွင်း၌ antioxidant သည်အရေးပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အားကြီးသော chelator ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်ကြီးသတ္တုများနှင့်အဆိပ်ဖြစ်စေသောသတ္တုများနှင့်သွေးခဲဆဲလ်များကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ergothioneine သည်အခြားသူများအကြား၊ လိုချင်သော cytokine, interleukin အပေါ်ပြုမူသောကြောင့်၎င်းသည် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်အားပေးပြီးသုတေသီများသည်၎င်း၏ရောင်ရမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနောက်ပိုင်းတွင်စုံစမ်းခဲ့သည်။ L - (+) - Ergothioneine (EGT) သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
ဓာတ်ပြုနိုင်သောအောက်စီဂျင်မော်လီကျူးများ (အခမဲ့အစွန်းရောက်) များကိုဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့်အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် mitochondrial DNA ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ ပရိုတိန်းဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် lipid peroxidation တို့ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Chelates - သို့မဟုတ်ထောင်ချောက်များ - အမျိုးမျိုးသောအပြုသဘောသတ္တုစုံလုံ;
superoxide radical ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအင်ဇိုင်းများကိုတားဆီးနေစဉ် glutathione peroxidase သို့မဟုတ် SOD ကဲ့သို့သော antioxidant အင်ဇိုင်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။
ဟီမိုဂလိုဗင်နှင့်မီမိုဂလိုဘင်စသည့်အမျိုးမျိုးသော haemoproteins ဓာတ်တိုးခြင်းကိုလျှော့ချသည်။
Vitamin C နှင့် E, glutathione နှင့် SOD ကဲ့သို့သောအခြား antioxidants ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဦး နှောက်ကို neurotoxins မှကာကွယ်ပေးပြီးသိမြင်မှုအားကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ဆယ်လူလာအသက်ရှူခြင်းနှင့်အဆီ lipolysis ကိုအားပေးသည်၊
hyaluronic acid, glucosamine, collagen နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် ၆ ပတ်ကြာပြီးနောက်မှာအဆစ်နာကျင်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပြီးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
L - (+) - Ergothioneine (EGT) လုံခွုံမှု
l-ergothioneine သည်နာမည်နှင့်မျှပြီး ergot မှိုမှဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအဆိပ်မရှိပါ။
ဥရောပသမဂ္ဂသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောဖြည့်စွက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများရှိပြီး l-ergothioneine ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဥရောပအစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏အစားအသောက်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှတွေ့ရှိချက်များအရကလေးငယ်များအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် ၂.၈၂ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ကလေးငယ်များအတွက် ၃.၃၉ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက် ၁.၃၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အပါအ ၀ င်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်မိခင်များပါဝင်သည်။
L - (+) - Ergothioneine (EGT) အမှုန့် အသုံးပြုမှု နှင့်လျှောက်လွှာ
L-ergothioneine ဖြည့်စွက်အစားအစာကဲ့သို့သောသင့်လျော်သောဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သက်တမ်းရှည်ဗီတာမင်များအပါအ ၀ င်တိုးတက်လာသောအစားအစာများသည်နာတာရှည်ရောဂါနှင့်အချိန်မတန်မီအိုမင်းရခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
သုတေသနပြုချက်အရ EGT ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ရေးအလားအလာရှိသောလုပ်ဆောင်မှုသည်ဆဲလ်များကိုဇီဝကမ္မနှင့် neurodegenerative ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။
သုတေသနပြုချက်အရ EGT သည် antioxidant အနေဖြင့်ရောင်ခြင်းကိုခုခံကာကွယ်နိုင်သည်။
Rheumatoid arthritis သည်ပြင်းထန်သော (နှင့်မကြာခဏနားမလည်သော) ရောင်ရမ်းခြင်းဖြင့်မှတ်သားထားသော autoimmune ရောဂါဖြစ်သည်။
cytoprotectant အနေဖြင့် EGT သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်ပါကင်ဆန်လူနာများကြားတွင်လူကြိုက်များသောဖြည့်စွက်ဖြစ်သည်။
EGT သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝဓါတ်တိုးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုပံ့ပိုးပေးပြီး ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုအောက်စီဂျင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုအခမဲ့အစွန်းရောက်များမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်သေခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့် neurodegenerative ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
EGT သည် cytoprotectant နှင့် antioxidant အလားအလာရှိသောကြောင့်အသည်းရောဂါရှိသူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။
အရေပြားဆဲလ်များကိုဓါတ်တိုးစေသည့်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသော cytoprotectant နှင့် antioxidant properties ကြောင့် EGT ကိုအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များစွာတွင်သင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် EGT ၏ antioxidant အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလေ့လာရန်အတွက်ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအားဒေါ်လာ ၁.၃၄ သန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
Oumari M က, et al ။ singlet အောက်စီဂျင်နှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် ergothioneine ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး။ အခမဲ့ Radic Biol Med ။ 2019 Aprပြီ; 134: 498-504 ။
Cheah, LK, Halliwell, ခ Ergothioneine; antioxidant အလားအလာ, ဇီဝကမ္မ function ကိုနှင့်ရောဂါအတွက်အခန်းကဏ္,, Biochim ။ ဇီဝဗေဒ။ Acta 2012; (5): 784-793 ။
Genghof, Ergothioneine နှင့် Hercynine ၏ DS Biosynthesis က။ မှိုနှင့် Actinomycetales, ဂျေ Bacteriol, 1970 ။ 103 (2): 475-478 ။
Repine, JE, Elkins, ND အကျိုးသက်ရောက်မှု ergothioneine ၏ပြင်းထန်သောအဆုတ်ဒဏ်ရာနှင့် cytokine မလုံလောက်သောကြွက်များတွင်ရောင်ခြင်းအပေါ် Prev ။ Med ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ (2012): S54-S79 ။
အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၊ အာဟာရနှင့်ဓာတ်မတည့် EFSA အဖွဲ့ (၂၀၁၇) ။ “ ဒြပ်ပေါင်း l-ergothioneine သည်အစားအစာအသစ်တစ်ခုအဖြစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းဖော်ပြချက် - ကလေးငယ်များနှင့်ကလေးငယ်များ၊ ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အဟာရဓာတ်များထိတွေ့မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ EFSA ဂျာနယ်။ 2017 (15): 11. Doi: 5060 / j.efsa.10.2903 ။